Mahad Salaad oo si kulul uga hadlay arrimaha Dhuusamareeb | Jowhar Somali news Leader
Home News Mahad Salaad oo si kulul uga hadlay arrimaha Dhuusamareeb
Mahad Salaad oo si kulul uga hadlay arrimaha Dhuusamareeb
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa si kulul uga hadlay xiisada dagaal ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Qoraal uu soo saaray Mahad Salaad ayaa ugu horeyntii ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay dagaalladii ka dhacay gudaha degmada Dhuusamareeb, waxana uu xusay in laga baaqsan karay dhibtaada iyo dhiiga ku daatay halkaasi.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka Xildhibaan Mahad Salaad
Intii dhimatay Allaha unaxariisto inta dhaawaca ahna Allaha u boogo dhayo. Aamiin
Dhibaato laga baaqsan karay ayay ahayd in dhiiga dhalinyaradeena sidaas bahalnimada ah loo daadiyo. Nasiib daro dad ayaa u arkay in ay magac iyo mansab ku gaarayaan daadinta dhiiga walaalahood, waxayna aamineen beenta iyo balanqaadyada aan jirin ee Nabad iyo Nolol, lkn mar aan dheerayn ayay ogaan doonaan iyagoo kulansaday talo la’aan, tabar la’aan, wiil la’aan, walaal la’aan iyo waxa loo sheegay oo aan jirin!
Culimada waxaan leenahay dadkiina iyo deegaankiina ayaad u soo shaqayseen, wixii aad saxdeena abaal ayaa la idinkaga hayaa, Ilaahey agtiisana ajar ayaad uga helaysaan inshaa’allah ee sabra, waxaana la gaari doonaa maalin la idinkugu garaabi doono in aad dad badan ka saxnaayeen.
Waxaan mar labaad ku celinayaa in dadka reer Galmudug looga turo colaada laga soo abaabulayo Villa Soomaaliya dadka walaalaha ahna aan la kala dhex dhigin fidno qabiil iyo mahadhooyin aan la mahdin.